कोरियामा लगातार १८ घण्टा काम गरेपछि एक श्रीलङ्कन कामदारको गयो ज्या’न – Eps Sathi
कोरियामा लगातार १८ घण्टा काम गरेपछि एक श्रीलङ्कन कामदारको गयो ज्या’न
July 27, 2021 895
दक्षिण कोरियाको ह्वासङ शहरमा रहेको एक प्लाष्टिक कम्पनीमा एक श्रिलङ्कन कामदारको ज्या’न ग’एको छ। कम्पनीको सामान समयमा नै बनाइसक्नुपर्ने बा’ध्य’ताका का’रण लगातार १८ घण्टा काम गरेपछि उनको ज्या’न ग’ए’को बुझिएको छ। ह्वासङ सेवु प्र’ह’री चौ’की’ले दिएको जानकारी अनुसार ति श्रिलङ्कन कामदार ३३ बर्षका थिए। ह्वासङ शहरको पाल्टन टाउनसिपमा रहेको प्लाष्टिक कम्पनीमा उनि काम गर्दथे।
जुलाई २५ तारिख विहान ३ बजेर ३० मिनेटमा उनको मृ”त्यु भएको हो। लगातारको कामले थ’कि’त उनि विहानपख कम्प्रेसरमा प्लेट फेर्ने क्रममा दु’र्घ’ट’नामा परेको बताइएको छ। घ’ट’ना हुँदा उनि नजिकै अन्य २ विदेशी कामदारहरु समेत थिए। तर तिनिहरुले उनलाई देखेनन। तर जब उनि चि’च्या’एर ढ’ल्न पुगे बल्ल उनका साथिले थाहा पाए। ति २ साथिहरुले तु’रुन्तै कम्पनीका म्यानेजरलाई खबर पुर्याए। म्यानेजर ११९ मा फोन गरेर सहयोग मागेका थिए।
प्र’ह’रीले दिएको प्रा’रम्भिक जान’कारीअनुसार कम्प्रेशरभित्र केहि तेलको प्रे’सर बाँकी रहँदा कम्प्रेसर ए’क्का’सी स्टा’र्ट हुन पुगि ‘घ’ट’ना घ’टे’को हो। तर यसको वि’स्तृत वि’वरण भने आउन बाँकी रहेको छ। ति श्रीलङकाली कामदार कम्पनीमा नयाँ हुन। उनि त्यस कम्पनीमा काम गर्न आएको ३ महिना पनि पुरा नभएको बताइएको छ।
मृ’त कामदार र उनका दुई साथि लगातार १८ घण्टादेखि काम गरिरहेको बुझिएको छ। उनिहरु अघिल्लो दिन विहान ९ बजेदेखि नै काममा लागेका थिए। रा’ति ११ बजे कम्पनीको म्यानेजर कम्पनी छा’डी घर गएको थियो। कम्पनीले आफ्नो उत्पादन समयमै सक्नका लागि उनिहरुलाई ओभरटाइम लगाएको बुझ्न आएको छ। यसले कोरियाको श्र’म का’नू’न मि’चि’एको छ छैन भनेर अहिले अ’नुस’न्धान भइरहेको छ।
Prevखुल्यो इजरायल जाने आवेदन, मासिक डेढ लाख माथि कमाई, को को जान पाउँछन? कसरी दिने आवेदन?
Nextकोरियामा को’रोना बढ्दो, आज अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै सं’क्रमित थपिए, हेरौं कति थपिएछन
कोरियामा गर्नै छाडे बिहे, अहिलेसम्मकै कम बिवाहको बन्यो रेकर्ड